Soo dejisan Midori 0.5.11 Standard iyo Portable – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Midori
Midori – browser a dheeldheel ka raaxo ee internet-ka. software The u saamaxaaya in ay la tabs iyo bookmarks shaqeeyaan, maareeyaan fadhiyada iyo daaqadaha, isticmaali qabnay adiga kuu gaar ah, iwm Midori ku jira modules dhisay-in si loo joojiyo xayaysiinta, dhigay hotkeys iyo ka mid kordhin dheeraad ah. software The kuu ogolaanayaa inaad Customize xuduudaha raadinta, size font iyo taariikhda ka mid ah goobaha uu booqday. Midori leedahay interface ah dareen leh oo laga beddeli karo baahida shakhsi ahaaneed ee user.
loading Fast of pages web
maamulka fadhiga Advanced
Isticmaal qabnay iyo hanaan gaar kuu ah
Ku xiridda kordhinta
Soo dejisan Midori
Faallo ku saabsan Midori
Midori Xirfadaha la xiriira